काठमाडौं - बिहान खाली पेटमा लसुन खानु निकै फाइदाजनक हुन्छ । बिहान खाली पेटमा लसुन खानु किन बढि प्रभावकारी हुन्छ रु किनकी बिहानको समयमा ब्याक्टेरिया बढि मात्रामा बाहिर आएका हुन्छन्, जसलाई लसुनमा हुने तत्वले नष्ट गर्न सक्छ ।१. उच्च रक्तचाप नियन्त्रण- ब ...
काठमाडौं - अधिकांश हामीले विहान उठेने वितिकै चिया वा कफी पिउने गर्छौं । तर, स्वास्थ्यका लागि विहान खाली पेटमा चिया वा कफी नभई मन तातो पानीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । स्वस्थ रहन दैनिक ३ लिटर पानी पिउनु जरुरी छ । विहान खाली पेटमा मन तातो पानी पिउनुका फाइदा ...
काठमाडौं - नेपाली टिमुर अहिले विश्व बजारमा लोकप्रिय हुँदै गएको छ । फ्रान्स र जर्मनीलगायत विश्वका विभिन्न देशमा यो बर्सेनि निर्यात हुन्छ । त्यस्तै, छिमेकी देश भारतमा यसको निर्यात बढी हुने गरेको छ । टिमुर नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुन्छ । य ...
काठमाडौं - शरीरलाई स्वस्थ राख्नका लागि क्याल्सियम र प्रोटीनजस्तै भिटामिन डीको पनि प्रमुख भूमिका हुन्छ । यो बोसोमा सजिलै घुल्छ र यसले आन्द्राबाट क्याल्सियम सोसेर हड्डीसम्म पु–याउने काम गर्छ । शरीरमा भिटामिन डीको कमी हुँदा अनेकथरी रोग लाग्छ । यसको ...
व्यायाम गर्नेले के खाने ? अवश्य जान्नुहोस्
काठमाडौं - सबैको चाहना स्वस्थ र फिट रहने हुन्छ । त्यसैले त फिटनेस सेन्टरदेखि जुम्बा एक्सरसाइजसम्ममा युवा पुस्ताको आकर्षण छ । स्वास्थ्य रहन व्यायाम गरेर मात्रै पुग्दैन । उचित आहार र पर्याप्त आराम पनि जरुरी पर्छ । त्यसैले, अब जान्नुहोस् व्यायामका दौरान ...
काठमाडौ - चना स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । हरेक बिहान भुटेको चना खानाले तपाईरहाम्रो शरीरलाई विभिन्न किसिमबाट फाइदा हुन्छ । यसमा पौष्टिक तत्व हुन्छ । यसले तपाईरहाम्रो पेटमा हुने कब्जियतबाट बचाउँछ । बजारमा बोक्रा भएको र बोक्रा छिलेको गरि दुई ...